Fitbit ichangounza iyo Charge 3 chiitiko tracker | IPhone nhau
Nacho Aragonés | | vamwe
Fitbit achangobva kuzivisa Charge 3 bracelet, mumwe wevakwikwidzi vakanangana neApple Watch, yatinotarisira kuvandudzwa mumavhiki anotevera.
Kubhadharisa 3 inotaura kuti ndiyo yakanyanya kuita zviitiko tracker nhasi uye hapana kushomeka kwezvikonzero. Zvakadaro, Fitbit inosimbisa chokwadi chekuti haisi wachi, asi chiitiko chekuita icho chinoshandawo se smartwatch.
Iyo Charge 3 inouya neakafanana dhizaini kune Charge 2, kureba kupfuura yakafara OLED nhema uye chena yekubata skrini. Iyi modhi nyowani ine zvakare mamwe magadzirirwo, mamwe mabhanhire uye mamwe akasarudzika edhisheni (Graphite aluminium ine chena yemitambo tambo mune yakachena dhizaini yeNike tambo yeApple Watch uye Rose Goridhe ine lavender jira tambo) iyo ingave iri mhando yekusarudza kana isu tinoda kuve neFitbit Pay (parizvino inowanikwa muSpain neboni., Carrefour, Santander uye Openbank).
Iyo Fitbit Charge 3 idhizaini yekuongorora muchina. Iyo inogara ichiongorora kurova kwemoyo, kurovedza muviri (otomatiki anoona masekisheni ekurovedza muviri), kurara, macalorie uye izvozvi zvinosanganisira kuongorora kwekuenda kumwedzi.
Iyo inodzivirirwa nemvura inosvika pamamita makumi mashanu, iine mwenje uye inotipa kuzvimiririra inosvika mazuva manomwe. Iyo yakanaka kwazvo mapoinzi eFitbit.
Uyewo, Mutero 3 unoshanda se smartwatch uye ichatibvumidza isu kugamuchira ma ziviso uye nekuvapindura, ona karenda, nguva neruzivo rwakawanda kana tichiitakura nenharembozha yedu.
Inoenderana neIOS, macOS, Android uye Windows (kuuya munguva pfupi) uye chishandiso chinoda iyo Fitbit app, nekuti kubva pairi tichagadzirisa nekuona rese data reCharge yedu 3. Pamusoro pezvo, nharembozha yedu ichapa iyo Internet kubatana uye GPS data kune Charge 3.
Ini pachangu ndinoda iyo Fitbit kubheja. Unogona kuichengetera izvozvi ne € 149,95 kana ye € 169,95 kana uchida imwe yemhando dzakakosha uye Fitbit anozozvitumira kwauri munaNovember.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » vamwe » Fitbit inosuma iyo Charge 3 chiitiko tracker